TV Sombhalo kukhompyutha yakho: Khetha bese uxhumano
TV Sombhalo ikhadi ikhompyutha yidivayisi okuyinto senzelwe kokuthola isignali ithelevishini. Manje emakethe anhlobonhlobo kumadivayisi ezivela abakhiqizi ezahlukene. onobuhle yamanje anemisila izilawuli kude, ngayo nefunda ngayo kungenzeka hhayi kuphela ukushintshela iziteshi, kodwa futhi ukurekhoda imibukiso futhi enze nezinye izenzo buqamama.
Okwamanje, kunezinhlobo ezine eziyinhloko zokuqonda le lezi amadivaysi. Lezi zihlanganisa, njengoba ikhadi yangaphakathi (ukufakwa iyunithi uhlelo), i ibhodi yangaphandle (exhunywe kwi-ExpressCard slot noma CardBus futhi yakhelwe laptops), Sombhalo inethiwekhi (egijima ngokusebenzisa umzila), kanye sangaphandle TV Sombhalo kukhompyutha yakho (uxhumano bakhe kuyinto ngokusebenzisa iyiphi imbobo ye-USB). Into esemqoka udinga funa lapho ukhetha idivaysi, kuba ukuhambisana isignali ithelevishini wathola. Ukwaziswa okunjalo njalo eboniswa ku ebhokisini noma kwi website esemthethweni ye umenzi. Kukhona ungafunda Sombhalo iyahambisana kukhompyutha yakho.
Ukusebenzisa amadivaysi amaningi
Esimweni lapho Sombhalo TV yekhompyutha yakho ixhunyiwe omunye ukuwabuka irekhodi ngesikhathi esifanayo kungaba Uhlelo ubonisa ukuthi isiteshi samanje. Uma usebenzisa namadivayisi amaningi, ngeke kakhulu ukuthuthukisa umuzwa womsebenzisi. Ngokwesibonelo, ngaleyo kungaba parallel wokubuka olulodwa isiteshi okuqoshiwe Uhlelo kwenye, kwenziwe kanyekanye ne ukuqopha iziteshi ezimbili, nokunye.
Hook Up Izici Special
Ngokusobala ukuxhuma Sombhalo TV kwikhompyutha yakho akuyona msebenzi onzima kangaka. Ngokuvamile, divayisi isivele afakwa iyunithi uhlelo noma umane ufakwa kwelinye imodeli ohambelana port. Njengoba sihambisana nale udinga ukuqaphela umehluko wemisindo nemiqondo yamagama athile. Okokuqala, it is a umbuzo Sombhalo TV ngamunye kuyadingeka ukuze ufake umshayeli. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa idiski noma kulayishiwe kusuka website esemthethweni ye umenzi. Uma omunye computer uxhuma amadivaysi amaningi, umthombo isignali kwazo kusafanele kube okufanayo. Isofthiwe ezimweni eziningi kunenzuzo isekela esiphezulu kudivayisi ezine analog inani elifanayo digital. Kuleso simo, uma Sombhalo TV yekhompyutha yakho kuyinto ezimbili noma kuhlangene, ngamanye amagama - siqukethe kumadivaysi amaningana, ke uyobonakala kudivayisi ezimbili ezihlukene.
Ukuthola isignali ithelevishini
Njengoba kuphawulwe ngenhla, Sombhalo nekhompyutha kufanele sisekele uhlobo isignali ukuthi kutholwa. Indlela elula ukubuka ukudluliswa ukusebenzisa «Media Centre». Njengoba uhlobo ye-TV itholakale, incike nemingcele eziningana. Okokuqala, uma ikhona system imithombo, ezifaka hlangana ukuhlahluba ingakanani imemori ekhona, isivinini processor kanye ihluzo amandla. Kuphinde kube nomthelela ekutheni uhlobo isignali ukuthi kutholwa. Kungaba analog noma digital. Hhayi kuphela othile imfihlo ukuthi ishuna TV kwikhompyutha yakho nge uhlobo isignali yesibili izonikeza isithombe esingcono ku qapha. Hhayi indima lokugcina futhi eyadlalwa nemingcele zedivayisi futhi uhlobo lukamakhalekhukhwini.
I-computer ebiza kakhulu ngenxa amakhasimende olindele kunazo
Indlela ukukhetha ithebhulethi ukuba ingane oneminyaka engu-7? Ukuthuthukisa i-tablet izingane
Izincwadi Electronic "Ritmix" - ukukhetha engabizi namuhla!
Intel HD Graphics: ukubuyekezwa ikhadi vidiyo. Intel HD Graphics 4400: Izibuyekezo
6770 ihluzo Radeon ikhadi: Ukubuyekeza, ukuhlolwa kanye nokubuyekeza
Indlela ukukhetha iphrinta ekhaya? A akanhlanhlatsi encane izinhlobo amadivaysi ukuphrinta
Kuyini ukuqeqeshwa Autogenic
Indlela ukufaka "Instagram" kukhompyutha: imfundo nezeluleko
United Kingdom, Brighton amahhotela. Isilinganiselwa Brighton amahhotela
Kanjani ukufundisa ingane ukuba Sadiq: amathiphu namasu
A izindlela ezimbalwa ezithakazelisayo indlela ukubhaka ithanga ngokuhlanganyela imikhiqizo ehlukene
Izingxenye Independent yokukhuluma
Amagama Ethandwa kakhulu amadoda Indian sika kusukela A to Z
Isakhiwo nemisebenzi lwamathambo omuntu. Isakhiwo skeleton
Umphakathi njengoba uhlelo ezenhlalo nezamasiko: Tindlelanchubo UKUCHAZISISA
Rosa kuvulandi - uyisihambi sakwamukela ajwayelekile
Umsunguli iSonto Lobu-Orthodox e-Japan, Japanese UNikolai: Biography, izithombe